Alshabaab oo gubay raashin dhuumaaleysi lagu geyn rabay Buurdhuubo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo gubay raashin dhuumaaleysi lagu geyn rabay Buurdhuubo
A warsame 10 March 2015 10 March 2015
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in Xarakada Al-shabaab ay gubeen raashin saarnaa ilaa 20 Gaari dameer oo la doonayay in la galiyo Buurdhuubo, halkaasoo Alshabaab go’doon saartay kadib markii lagala wareegay dhowr bilood ka hor.
Wararka ayaa sheegaya in Al-shabaab ay gacanta ku dhigeen Ilaa 20 Gaari Dameer oo lagu waday raashin islamarkaana la doonayay in Buurdhuubo.
Alshabaab ayaa la sheegay iney meel fagaare ah ku gubeen raashinkaasi islamarkaana ay dameeradii siday duurka ku fasaxeen.
Magaalooyinka Alshababaab go’doomiyeen sida, Buulo Barde, Buurdhuubo, Waajid iyo kuwa kale ayaa si dhuumaaleysi ah raashin lagu gaarsiiyaa gaari dameero.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo gudaha u galay deegaanka Masaajid Cali Guduud ee Sh. Dhexe
Madaxweynaha Puntland oo xariga ka jaray jidad laami ah oo laga dhisay Garowe